Ngwa kacha mma iji mepụta slideshows maka gam akporo na iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ngwa imepụta slides Ha na-achọwanye ekele n'eziokwu ahụ na onye ọ bụla nwere ike iche na ọ bụ ọkachamara na-agbanwe foto ha na mmetụta dị iche iche ma soro ha "ọha" na-ekerịta ha.
Ihe dị iche iche nwere ike imetụta nhọrọ nke ngwa ị ga-eji, dịka:
la ụdị mmetụtaNgwa ọ bụla bara uru nnu ya kwesịrị inye ọtụtụ ezigbo mma, ọ bụ ezie na o doro anya na anyị ekwesịghị iche na otu mmetụta, ihe ijuanya ọ nwere ike ịbụ, nwere ike ịbụ iji mepụta ihe ngosi nzuzu nzuzu;
la mfe iji: iwu na ogwe ogwe agha gha aghaghi ighota ime ka oru di nfe diri ndi oru;
la mfe nke nkekọrịta: ịkekọrịta nhọrọ ga-adị n'ime iru nke .... pịa !!
N'isiokwu a, anyị ga-anwa ịnye ndu bara uru maka ndị niile chọrọ ịnwale ihu ọma ha na ngwa mmịfe site na ịkọwa atụmatụ ha, uru na ọghọm. Iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga-ekewa isiokwu ahụ ngalaba atọ, otu raara nye naanị ndị ọrụ android, otu raara nye naanị ndị ọrụ iPhone na otu raara nye ẹdude ngosi mmịfe ngwa na ha abuo Amaokwu
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Ngwa 30 iji dozie vidiyo ma dezie fim (Android na iPhone)
Ihe ngosi mmịfe kachasị mma maka gam akporo
a) Foto FX Ndụ na akwụkwọ ahụ aja:
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ngwa kachasị ewu ewu na ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị nde 13 nbudata.
Ngwa ahụ na-enye ọtụtụ ọrụ, na-enye gị ohere bulite foto, imepụta ihe ngosi mmịfe, tinye ihe nkiri, setịpụ agba, mmetụta, na ọtụtụ ndị ọzọ. Foto FX Ndụ na akwụkwọ ahụ aja Ọ nwere ihe nchịkọta akụkọ foto magburu onwe ya, enwere ike ịhazi ya ma nye gị ohere ịmepụta akwụkwọ ahụaja dị elu. Ke adianade do, ọ bụ nnọọ kensinammuo na ya mere mfe iji ọbụna n'ihi na-enwechaghị ahụmahụ.
Advantkọ ihe ụfọdụ gụnyere enweghị ike ịmalite igwefoto na ngwa ahụ na-agba ọsọ, ọchịchọ ịda ada mgbe enwere ọtụtụ folda mepere, na enweghị ntụgharị foto akpaka.
nke abụọ Photo ihe ngosi mmịfe na video onye rụrụ:
Ngwa a na-enye ahụmịhe kachasị mma nke ihe ngosi mmịfe n'ezie na nchikota nke interface na ngwa ọrụ dị elu.
Photo ihe ngosi mmịfe -enye a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mmetụta, nzacha na okpokolo agba, Bilie a adaba ọdịnaya management na-eme ka ọ dị mfe ike mma slideshows site na-agbakwunye mkpachị ẹdude ke gallery dị iche iche nchekwa. N'otu oge ahụ, ọ na-esiri ike ịkekọrịta vidiyo ndị echekwara; Ọzọkwa, ogo ihe oyiyi na-agbanwe dịka ọkwa ahọpụtara.
C)PIXGRAM - Music Photo Ihe ngosi mmịfe:
Nke a ihe ngosi mmịfe onye ngwa na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla bulite foto, họrọ ọkacha mmasị ha music, tinye nzacha na mmetụta, mepụta ihe ngosi mmịfe ha ma kesaa ya na ụwa ma ọ bụ n'ezie ezigbo ngwa maka ndị mbido.
Pixgram na-enye gị ohere ịchekwa ihe ngosi mmịfe n'ụdị dị iche iche, nwere usoro nzacha dị mma, ma chọọ iji egwu nkeonwe. O nwere ike ọ gaghị abụ ngwa kachasị ọkachamara na ahịa, mana ọ na-arụ ọrụ ahụ.
re) Ngosipụta onye okike:
Ngosipụta onye okike ọ naghị enwe ọ theụ na njirimara nke ngwa ndị edepụtara na isi ihe ndị gara aga, mana ọ na-enye ohere dị ịtụnanya maka ndị bidoro ịmepụta slideshows: ekele na interface kensinammuo, ọ dị mfe ibugo foto, chọọ ha, hazie playback aghara na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwekwara wijetị maka mmelite foto akpaka, nke na-enye gị ohere itinye ndị ọhụrụ.
N'aka nke ọzọ, na-eme ka atụmatụ ngosi sara mbara na-ada ada ma ọ nweghị atụmatụ nke ngwa na otu ụdị ahụ na-enye.
Framebọchị bụ ngwa emere maka ndị editọ ọkachamara ma na-enye ndị ọrụ ngwugwu bara ọgaranya, na-esonyere ya na nhọrọ nchịkọta nhọrọ na usoro mmekọrịta. Enwere ike iji ngwa ahụ n'ịntanetị ma ọ ga-ekwe omume ịmepụta mmịfe mmịfe dị mma, na-eji ọrụ dị iche iche iji nye mmịfe mmịfe gị mmetụ pụrụ iche.
O di nwute, Dayframe na-ewepu batrị nke ihe eji eme ihe n'oge di nkenke ma nwee ike isiri ndi nbido ike iji.
Ihe ngosi mmịfe kacha mma maka iPhone
PicPlayPost bụ ihe kensinammuo ngwa na-enye gị ohere iji tinye ọnụ foto, vidiyo, egwu na gifs, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu nke ụdị ya. Ngwa nwere ike ịnweta onye ọ bụla ma na-enye ọrụ dị irè iji sonye vidiyo na onyonyo.
PicPlayPost Ọ nwere interface dị omimi nke na-enye gị ohere itinye foto 9, GIF ma ọ bụ vidiyo site na ọrụ ọ bụla ma mee ka ha nwekwuo mmasị na nhọrọ dị mma nke nsonaazụ mkpebi dị elu.
The decidedly mmachi music maka Ihe ngosi mmịfe na ngwa nke a watermark ka ngosi mmịfe, ọ bụ ezie na customizable, adịchaghị obi ụtọ.
nke abụọ SlideLab:
SlideLab na-enye gị ohere ịgbanwe foto n'ime vidiyo na nkeji ole na ole site na itinye egwu egwu ma ọ bụ nke ọdịnala na ngwa ahụ. Enwere ike ịchekwa ihe ngosi mmịfe ndị e kere eke na ngwaọrụ mkpanaka, na-edebe nha mbụ ha, ma ọ bụ na-ekerịta na profaịlụ mmekọrịta ha emeelarịrị mkpebi nke netwọkụ mmekọrịta ha chọrọ ịkekọrịta. Ngwa ahụ na-enyekwa ọtụtụ ihe nzacha iji tinye ihe oyiyi gị.
Naanị oghom SlideLab ekweghi ka iji egwu site iTunes ikere òkè Facebook O Instagram. Ọ ka bụ ngwa pụrụ iche.
C) Foto Ngosi Onye Isi:
Onye nduzi ihe ngosi enye ohereiPhone / iPad ịghọ ihe ikpo okwu maka slideshows, na-eji foto echekwara na ngwaọrụ. Ọnụ ọgụgụ nke mmetụta awa bụ obi ụtọ, karịsịa na-ewere na ngwa-enye gị ohere ịzọpụta slideshows na HD ọbụna na ihuenyo zuru. Na mgbakwunye, ngwa ahụ na-enye gị ohere ịkekọrịta slideshows na netwọkụ mmekọrịta na-enweghị nsogbu.
Onye nduzi ihe ngosi Ọ nwere a dị mfe ma kensinammuo foto nchịkọta akụkọ na ọ na-enye gị ohere ike music videos.
Kama nke ahụ, nhazi ọsọ nwere ike imebi site na ebe nchekwa nkeiPhone. N'agbanyeghị nke a, ọ ka nwere ike ịrụ ụka na ọ kacha mma maka ihe ngosi mmịfe iOS.
Picflow O nweghi ihe omuma nile nke ngwa ndi ozo na enye, ma obu ngwa nke di mfe ijikwa ma jikwaa mgbe ị na-eme slideshows. Ngwa a na - enye gị ohere ịtọ oge ọkpụkpọ nke foto ọ bụla ebugoro wee dozie ya ka ịpịgharịa ya na egwu egwu ị họọrọ nke nwekwara ike ibudata naiPod.
PicFlowNaanị n'ime nkeji ole na ole, ọ na-enye gị ohere ịmepụta ihe ngosi dị egwu ma dị egwu iji kesaa na Facebook ma ọ bụ Instagram, na-akụ ihe onyonyo site na ọrụ mmịfe na tuo ma tinye otu n'ime ntụgharị 18 dị.
O di nwute na mbipute n'efu enweghi oke na nbudata vidiyo anaghị aga n'ihu 30 FPS.
iMovie awade a ọkpụrụkpụ ego nke atụmatụ na a elu larịị nke àgwà, na-eme ya otu n'ime ndị kasị mma ngwa maka eke slideshows maka iPhone. The ngwa-enye gị ohere ịgbanwe ọdịyo nke ọ bụla clip ị mepụtara na awade a dịgasị iche iche nke nkiri gburugburu, ikwu n'ụzọ, nsonaazụ ụda na aha. N'ihi ihe ndị a, ọtụtụ ndị ọrụ na-eleghara ngwa ndị ọzọ anya ma jiri iMovie maka mkpa niile metụtara edezi vidiyo ma ọ bụ mepụta slideshows.
Ihe mere eji eji ngwa a maka iPhone Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma maka ịmepụta slideshows. N'aka nke ọzọ, ngwa ahụ anaghị agbanwe agbanwe ma sie ike ịrụ ọrụ maka ndị mbido.
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Mepụta foto vidiyo, egwu, mmetụta dị ka ihe ngosi mmịfe eserese site na PC
Ihe ngosi mmịfe kachasị mma maka gam akporo na iPhone
Maka ngwaọrụ abụọ android nke ahụ maka iPhone , VivaVideo nwere ụdị nke ị nwere ike iji wee budata na n'efu. Mgbe edezi ihe oyiyi gị, ị nwere ike ịhọrọ otu "pro ọnọdụ" maka mgbanwe ka ukwuu na "ngwa ngwa mode" maka ụdị ngwa ngwa na ngwa ngwa ọzọ. Igwefoto dị na ngwa ahụ na-enye gị ohere ịdekọ vidiyo mgbe ị na-etinye ihe karịrị mmetụta 60 pụrụ iche. Mgbe ahụ ị nwere ike tinye ikwu n'ụzọ, nsonaazụ ụda na ọbụna oyiri video mere.
Mgbe ịpụ na ngwa ahụ, mgbanwe gị ga-echekwa na akpaghị aka ma ị nwere ike ikpokọta vidiyo site na njirimara akụkọ akụkọ.
O di nwute na, free version nke ngwa na-agụnye ihe intrusive watermark na videos, atụmatụ a otutu mgbasa ozi, na a nkeji ise ngosi mmịfe ịgba. Iji kpochapụ iwe ndị a, ị ga-azụrịrị pro pro maka $ 2,99,3.
nke abụọ Movavi:
Ọ dị maka ndị ọrụ abụọ android maka ndị ọrụ abụọ iPhone ma na-enye tọn nhọrọ iji dezie slideshows, foto, vidiyo, na ndị ọzọ. Movavi Ọ bụ n'efu, vidiyo ya na edezi vidiyo na-enye ahụmịhe ọkachamara, yana ike itinye nsonaazụ dị elu ma rụọ ọrụ na ọtụtụ ụdị vidiyo dị iche iche. Ọ ga - ekwe omume ịhazi ụda ahụ, dekọọ site na ihuenyo iji jide oku vidiyo ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ na - eme n'oge na ngwaọrụ gị yana ọbụlagodi na ntanetị ma ọ bụ megharịa foto dị mfe.
Enwekwara atụmatụ ndị ọzọ dị jụụ dị ka ike ịmepụta ndepụta okwu omenala. Movavi Ọ dịkwa na ụdị akwụ ụgwọ, onye nhọrọ ya adịchaghị hapụ $ 59,95. Usersfọdụ ndị ọrụ achọpụtawo na ngwaọrụ ndị a siri ike iji mee ihe ọ gwụla ma ha bụ ndị maara ihe.
Ọ dị maka ha abụọ android nke ahụ maka iOS na ọ bụ ngwa zuru oke maka ịmepụta ngosi maka ndepụta akụkọ akụkọ Instagram n'ihi na ọ na-agbanwe vidiyo ahụ na square. Agbanyeghị, rue taa, ọ nwere nhọrọ eserese eserese nke dị mma maka ya Instagram na maka IGTV. The free version nke a ngwa ókè a square foto ngosi mmịfe 30 sekọnd na a vetikal foto ngosi mmịfe ka 11 sekọnd, nke bụ nnọọ na-akụda mmụọ.
Na mkpokọta, MoShow ọ ga-esi ike iji na-enweghị etinye na pro version. Ngwa MoShow ụsọ oké osimiri $ 5,99 kwa ọnwa ma ọ bụ $ 35,99 n'afọ.
Dịka ị nwere ike ịkọ nkọ, enwere ọtụtụ ngwa a raara nye edezi foto na vidiyo yana ọ na-esikarị ike nghọta ma họrọ ndị kachasị adabara mkpa anyị ma kọwaa ha niile.
Anyi anwaala; Ugbu a naanị ihe fọdụrụnụ bụ ịgbada azụmaahịa!
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Ngwa iji mepụta akụkọ site na foto na vidiyo vidiyo (Android - iPhone)